Fahaleovantena ara-tsakafo 100 000 Ha no hohajariana
“Tsy maintsy tratrarina ny tanjona amin`ny fahavitan-tena ara-tsakafo”, hoy ny filoha Rajoelina, nandritra ny fanamarihana ny taom-pambolem-bary 2019-2020 tany Sarobaratra Ifanja faritra Itasy.
Fanotofana bontolo an’Ambohitrimanjaka Hisy voka-dratsy tsy voafaritra ho an’ny fanjakana
Hisy voka-dratsy tsy voafaritra ho an’ny fanjakana repoblikanina ny fanotofana bontolo an’Ambohitrimanjaka sy ny manodidina,
Bemasoandro Itaosy Trano iray may kila vokatry ny fandrehetana labozia
Toy ny faritra rehetra dia misedra fahatapahan-jiro matetika ihany koa ny eny Bemasoandro Itaosy eny.
Ny alarobia 07 aogositra tokony ho tamin’ny 12 ora sasany alina no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana ity raha tsiahivina. Kamiao iray avy any Vontovorona nentina mpamily haterina any amin’ny orinasa hiasany eny amin’ny By-Pass no nifanena tampoka tamina fiara hafa. Tsy nahatana ny familiana ilay mpamily kamiao ka nifatratra tany amina sarety miisa 06 nipetraka teo amoron-dalana. Lasa nandositra avy hatrany ilay mpamily sy ny fiara nentiny rehefa avy nandona ireo sarety. Fotoana fohy taty aorina dia tonga teny an-toerana ny polisy nizaha ny zava-nitranga. Tamin’izany no nahitana ny vatana mangatsiakana lehilahy iray tao anatin’ny iray tamin’ireo sarety ireo. Fantatra fa mpiambina sy mpitarika sarety eny an-toerana ity tovolahy hita faty ity. Fantatra ihany koa fa natory tao anatin’ilay sarety izy tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza ka dia maty voapotsitra tao. Nokarohina ilay kamiao nahavanon-doza ka ny zoma teo no nitolo-batana teo anivon’ny BAC ilay mpamily. Niaiky ho nandona ireo sarety ireo izy nandritra ny fanadihadiana natao azy. Efa natolotra ny fampanoavana omaly alatsinainy ny lehilahy.